Xaggeen ku sugannahay
Xarunta Cilmibaarista ee Waaxaha isku bahaystay Cilmibaarista Soomaalieed (XCS) , waxay asal ahaan ka soo unkamantay mirihii kooxda Cilmibaarista Soomaaliyeed oo la aasaasay dhammaaadka todobaatameeyadii, kooxdaasoo markeeda hore wada shaqayn ka dhexeeyey iyaga iyo Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed iyo Akadeemiyada Cilmiga, Fanka iyo Suugaanta; markii dambana â€“dagaalkii sokeeye awgiiâ€”ayaa iskooda si madax bannaan u sii waday cilmibaaristaas gaar ahaan xagga daraasaadka luqadda iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Haatan Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed (XCS), oo abaabulkeeda leh Waaxo jaamacadeed oo kala ah: Waaxda Cilmi-afeedka (Dipartimento di Linguistica), Waaxda Daraasaadka Caalamiga (Dipartimento di Studi Internazionali), Waaxda Qorshaynta Tababarrada iyo Habka Waxbaridda (Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica) iyo Waaxda Baayolojiga (Dipartimento di Biologia), waxaa lala damacsanyahay in ay noqoto xarun isku xirto dardargelisana hawlaha gudaha iyo dibadda Jaamacadda si loo abuuro Xarun ku shaqa leh: cilmibaarista, tababbarka, ururuinta daraasaadka laga helo miidiyaha kala duwan, oo ku wada saabsan arrimaha Soomaalida xagga culuunta bulshada, taariikhda, fanka iyo sayniska.
XCS waa natiijadii horumarka hawlaha cilmibaarista oo 30kan sano ee dambe ay qabteen cilmibaarayaasha talyaaniga, arrintanna waxay salka ku haysaa dhaqan cilmibaariseed ee xoog leh oo aqoonyahannada taliyaanigu waayadii hore ay caanka ku ahaayeen.
Midda kale, jiritaanka qurbajoogta, aqoonyahannada iyo burburka qaranka soomaaliyeed (oo sabab u ah dagaalka sokeeye, oo dalkaas baabi'iyey laga billaabo 1990), wuxuu keeney baahida loo qabo in la kaydiyo dhammaan qoraalladii horey u jireen. Dabcan intii horey uga qayb qaadatay ama ka shaqaysay hawlahaas waxay wada dareensanyihiin in loo baahanyahay abuurista XCS si tusaale iyo tixraac ugu noqoto dhammaan cilmibaarayaasha, aqoonyahannada, barbaariyeyaasha iyo giddi intii danaynayso inay wax ka ogaato taariikhda iyo xaqaa'iqda soomaaliyeed iyo xataa xiriika arrimahaas ay la leeyihiin Geeska Afrika oo dhan.
Waxaa aad xoogga loo saarayaa sidii "internet"-ka loogu shubi lahaa dhammaan wixii xog ah ee la heli karo oo ku saabsan qoraallo iyo dokumentooyin diyaarsan, natiijooyin cilmibaaris si dhammaan macluumaadkaas cilmiyeed ay u noqdaan wax ay ka faa'idaysan karaan Soomaalida oo idil ee ku kala baahsan dunida dacalladeeda iyo dhammaan aqoonyahannada daneeya arrimahan.
Hawlaha XCS waxaa ka mid ah oo dawr weyn ka ciyaaraya mashaariicda cilmibaarista (oo badanaa si wada shaqayn ah uga qayb qaadanayaan jaamacado kale iyo hay'ado cilmibaariseed): seminaariyo taxan, muxaadarooyin, shirarweynayaal, latashiyo, tababarro, faafinta ama daabacaadda qoraallo hawlahooda gacanta lagu hayo, iyo buugaagta taxana ah ee la yiraahdo "Studi Somali" iyo ururinta dokumentooyinka muhimka u ah Soomaaliya.
XCS waxay ku tala jirtaa inay la gasho wada hadal hay'adaha ku sugan degaankeeda, gaar ahaan hay'adaha maxalliga, iyo inay la shaqayso xataa hay'adaha dawladda iyo kuwa caalamigaba, sida Guddiga Yurub. Qaramada Midoobey iyo FAO.
Waxaa codsan kara, sida xeerku uu banaynaayo, in uu ka mid noqdo XCS bareyaasha jaamacadda "Universita' di Roma Tre" iyo xataa aqoonyahannada jaamacadaha kale, hay'adaha cilmibaarista, hey'adaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahayba.
Cusboonayntii u dambaysey: 10 / 06 / 11 - 15:19:21